बिना मगरलाई यसकारण जिताउनुपर्छ कञ्चनपुर १ बाट – Everest Dainik
बिना मगरलाई यसकारण जिताउनुपर्छ कञ्चनपुर १ बाट
आम निर्वाचन कुनै अमुक व्यक्तिलाई नेता बनाउने प्रक्रिया मात्रै होइन, हरेक मतदाताले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने कार्य हो । आफ्नो भविष्य अन्धकारमय बनाउने कि उज्ज्वल ? यो प्रश्नको जवाफ मतदाताले मतपत्रमा लगाइने स्वस्तिक छापले निर्धारण गर्छ । सही उम्मेदवारलाई मतदान गरेर जिताइयो भने हरेक मतदाता र निर्वाचन क्षेत्रको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ भने गलत ठाउँमा मतदान गरियो भने भविष्य अन्धकार । आम निर्वाचनको यो प्रक्रिया हरेक ५/५ वर्षमा चलिरहन्छ । गलत ठाउँमा मतदान गरेका मतदाताले ५ वर्षसम्म पछुताउनु बाहेक कुनै उपाय हुँदैन ।
देशैभरिजस्तै कञ्चनपुरको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा समेत चुनावी चटारो ह्वात्तै बढेको छ । यो आलेख १ नम्बर क्षेत्रको विषयवस्तुमा मात्रै केन्द्रीत रहेकाले यहाँ १ नम्बर क्षेत्रका मतदातालाई उपयुक्त उम्मेदवार छान्न सहज हुने गरी आलेख तयार गरिएको छ । १ नम्बर क्षेत्रमा विकासका थुप्रै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आधारभूत भौतिक पूर्वाधार गुणस्तरीय पक्की सडकबाटै वञ्चित छ । यहाँका मुख्य सडक नै हिलाम्मे र धुलाम्मे छन् । सीमा समस्या, जंगली जनावरको आतंक, सशक्त सडक र पुल सञ्जालको अभाव, अव्यवस्थित बसोबास र ऐलानी समस्या, सीमसार समस्या, आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन नहुनु लगायत थुपै्र समस्या वर्षाैदेखि रहँदै आएका छन् ।
कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र पर्ने १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा आसन्न निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार र कांग्रेसका उम्मेदवारबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि वाम गठबन्धनबाट बिना मगर र कांग्रेसबाट दिवानसिंह विष्ट प्रतिस्पर्धामा छन् । दिवानसिंह विष्ट निवर्तमान सांसद भइसकेका र परीक्षण भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनले आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालमा १ नम्बर क्षेत्रको विकासका लागि के–के गरे ? त्यो जनताले देखेका छन् । तसर्थ, प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र परीक्षण भइसकेका नेताभन्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा लोकप्रिय, संघर्षशील र सशक्त युवा नेतृ बिना मगरले नै अब दक्षिणी क्षेत्रको विकास गर्न सक्ने देखिन्छ । बिना मगर जितेर गएपछि विकासमै केन्द्रीत हुन्छिन् नै भन्ने अग्रिम ग्यारेन्टी केही नहुने भएकाले मतदाताले आशंका गर्ने ठाउँ त रहन्छ । तर, अघिल्लो निर्वाचनमा पराजित भएर पनि बिना मगरले देखाएको सक्रियता तथा व्यक्तिगत र पार्टीगत पहलमा भित्र्याइएका थुप्रै विकास आयोजनाले बिना मगर जितेर गएपछि पनि विकासमा केन्द्रीय हुनेछिन् भन्ने अनुमान चाहिँ लगाउन सकिन्छ । परीक्षण भइसकेका नेता नै कांग्रेसबाट उम्मेदवार भएको बेला १ पटक बिना मगरलाई पनि परीक्षण गरेर उनको क्षमता र सक्रियतालाई परीक्षण गर्नुको विकल्प मतदातासामु देखिँदैन । बिना मगरलाई कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका मतदाताले किन मत दिनु आवश्यक छ त ?
सम्बन्धित् समाचार यस्तो छ निर्मला पन्तको पोस्टमार्टम रिपोर्ट
क्षतिपूर्ति सहितको तीब्र विकास
कञ्चनपुरको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका जनता मुलुकमा प्रजातन्त्र आएपछि नै विकासको प्रतिक्षामा छन् । मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन हुँदै सरकार निर्माण र बजेट सार्वजनिक भएपनि यस क्षेत्रका मुख्य सडक नै अझैं कालोपत्रे भएका छैनन् । दशकौंदेखि कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र विभेदको शिकार भएको छ । विकासको समान वितरण नहुनु तथा राजनीतिक पहुँच नभएका कारण कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र आवश्यक विकास बजेटबाट वञ्चित हुँदै आएको छ ।
कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारमा राजनीतिक पहुँच पु¥याउन सक्ने नेतृत्व चयन हुनुपर्छ । सरकारमा दबाब दिएर यस क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट ल्याउन सक्ने नेतृत्वले मात्रै विकासलाई तीव्रता दिन सक्छन् । अब विकासको समाधान वितरण हुँदा मात्रै पनि दक्षिणी क्षेत्रमाथि अन्याय हुन्छ । दक्षिणी क्षेत्र विगतमा विभेदमा परेका कारण अब क्षतिपूर्ति सहितको तीव्र विकास चाहन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित र लोकप्रिय तथा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति बिना मगर नै एक मात्र विकल्प हुन् । बिना मगरले अनुरोध, दबाब र संघर्षमार्फत् १ नम्बर क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक बजेट र योजना ल्याउन सक्छिन् । विपक्षी उम्मेदवारभन्दा त बिना मगरले बढी नै गर्न सक्छिन् भन्नेमा कुनै द्विविधा देखिँदैन ।
दक्षिणी क्षेत्रले राजनीतिक रुपमा स्थापित र पहुँच भएको नेता नपाउँदा विभिन्न साना–साना समस्या पर्दा पनि हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय वासिन्दाका समस्या राजनीतिक नेतृत्वसम्म नपुग्दा जनता वेवारिसेझैं हुने गरेका छन् । सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले दुःख दिँदा होस् वा बाढी र नदी कटानजस्ता आकस्मिक संकट आइललाग्दा सरकारबाट तत्काल समस्याको हल हुँदैन । जसले गर्दा स्थानीय वासिन्दाले दुःख र संकट सहेर बस्नुपर्छ ।
बिना मगरको लोकप्रियता र स्थापित नेतृत्वलाई जिताए स्थानीय स्तरका समस्यालाई तत्काल सरकारसम्म पु¥याउन सकिन्छ । जसले गर्दा सरकारले समस्याको तत्काल समाधानका लागि काम गर्नेछ । स्थापित र लोकप्रिय नेता बिना मगरमार्फत् सरकार र संसदसम्म स्थानीय वासिन्दाका समस्या पु¥याउन सकिए त्यसको प्रभावकारिता बढी हुनेछ । बिना मगर पार्टी र केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभावशाली नेतृ भएकाले केन्द्र सरकारमा मन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना समेत देखिन्छ । जसबाट कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रको राजनीतिक पहुँच झनै बढ्ने छ ।
सम्बन्धित् समाचार पाठेघर र स्तन क्यान्सर परीक्षणको अभियान लिएर आएको : मन्त्री मगर
तीनै तहबीच सशक्त समन्वय
मु्लुक संघीयतामा गएपछि हरेक क्षेत्रमा तीव्र विकास गर्न सकिने आशा र प्रचारवाजी गरिएको छ । तर, मुलुक संघीयतामा जाने बित्तिकै चमत्कारिक रुपमा विकास भइहाल्ने होइन । संघीयताका केही नकारात्मक पक्ष पनि छन्, जसले विकासमा अनेक अड्चन आउँछन् । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध हुन सके मात्रै जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाउँछन् ।
कञ्चनपुरको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका सबै स्थानीय तहमा वाम गठबन्धनमा सम्वद्ध पार्टीका प्रमुख र उपप्रमुख तथा अधिकांश वडामा वडाध्यक्ष र सदस्य जितेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश र केन्द्रबाट प्राप्त बजेट र योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने हुन् । प्रदेश र केन्द्रबाट पर्याप्त बजेट र योजना प्राप्त हुन नसके स्थानीय तहले विकासको अनुभूति गराउन अप्ठ्यारो हुन्छ । तसर्थ, कञ्चनपुरको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा विकासको अनुभूति गराउन र तीनै तहबीच सशक्त सम्बन्ध स्थापनाका लागि वाम गठबन्धनका उम्मेदवारले नै जित्नुपर्ने आवश्यक छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा फरक–फरक दलको सरकार भयो भने आपसी विवाद र द्वन्द्व बढ्ने तथा जनताले दुःख पाइरहनुपर्ने अवस्था रहन्छ । तसर्थ, ३ वटै तहबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापनाका लागि प्रतिनिधिसभामा बिना मगर तथा प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट दिनु आवश्यक छ ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक र सामाजिक समस्या देखिने गरेका छन् । जसले गर्दा जनताले लगातार दुःख पाइराख्नुपरेको छ । १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको सन्दर्भमा भन्दा आरक्ष विस्थापितको पुनस्र्थापना र सीमा समस्या समाधान राजनीतिक अस्थिरताका कारण हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक अस्थिरतालाई देखाएर राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो अकर्मण्यता र कमजोरी लु्काउने समेत गरेका छन् । तसर्थ, मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता अत्यावश्यक छ । वाम गठबन्धन बन्नुको प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता पनि हो । त्यसैले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न र देशमा वामपन्थीको मजबुत सरकार बनाउन बिना मगरलाई मतदान गर्नु आवश्यक छ ।
सम्बन्धित् समाचार महाकाली नदीमा साहसिक जलयात्राका लागि अध्ययन
वामपन्थी गठबन्धन आर्थिक विकासको खाका र योजनासहित चुनावी मैदानमा होमिएको छ । बिना मगरलाई मतदान गरी जिताएपछि केन्द्र तथा प्रदेशमा वामपन्थी सरकार बन्ने र त्यो सरकारले आर्थिक प्रगतिका कार्यक्रम लागू गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । देशव्यापी रुपमा आर्थिक विकासका कार्यक्रम लागू हुँदा त्यसबाट १ नम्बर क्षेत्रका जनताले समेत लाभ लिन सक्ने छन् ।
अर्काेतिर, बिना मगरले व्यक्तिगत पहलमा कञ्चनपुरको १ नम्बर क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना तथा लघुउद्यम र स्वरोजगारका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छन् । निर्वाचन क्षेत्रका व्यक्तिमा भएको सीपलाई उपयोग गर्दै आर्थिक लाभ गर्न सकिने योजना बिना मगरसँग भएकाले बिना मगरलाई मतदान गरेर आर्थिक प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिने देखिन्छ । बिना मगरको राजनीतिक पहुँचको उपयोग गर्दै कञ्चनपुरमा रोजगारीका विभिन्न अवसर भित्र्याउन सकिन्छ ।
संघर्षपूर्ण विगतको सम्मान
बिना मगर कञ्चनपुरको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रकी उम्मेदवार मात्रै होइनन् । उनको संघर्षपूर्ण विगतको छुट्टै इतिहास छ । नेपालको राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनमा प्रत्यक्ष जोडिएर २७ महिना कष्टपूर्ण जेलजीवन बिताउँदै मृत्युको मुखबाट बाँचेर आएकी नेतृ हुन् बिना मगर । राजनीतिक आन्दोलनमार्फत्् काठमाडौंमा स्थापित भइसकेपछि पनि उनले २०७० आफ्नो जन्मभूमिको सेवा गर्न भन्दै माइती क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा होमिने निर्णय गरेकी हुन् । २०७० सालको निर्वाचनमा पराजित भएर पनि उनी लगातार जन्मभूमिको धुलोमाटोमा आफ्ना राजनीतिक गतिविधि र विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकी छन् ।
संघर्षपूर्ण विगत, जन्मभूमिप्रतिको लगाव र विकास गर्ने इच्छाशक्तिलाई सम्मान गर्दै बिना मगरलाई भोट दिनुपर्छ । चुनावी मैदानमै होमिइरहेका बेला बिना मगरलाई पतिशोक परेको छ । पतिशोकको पीडामा रहेका बेला १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट बिना मगरलाई गरिएको मतदान मल्हम पनि बन्न सक्छ । तसर्थ, आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि तथा संघर्षपूर्ण नेतृको सम्मानका लागि आसन्न निर्वाचनमा बिना मगर तथा वाम गठबन्धनलाई मतदान गर्नु आवश्यक छ ।